NaGumiguru 2017, Iwe Unofanirwa Kuva Neiyo Transparent SSL Chitupa | Martech Zone
NaGumiguru 2017, Iwe Unofanirwa Kuva Neiyo Isiri pachena SSL Chitupa
Chipiri, August 8, 2017 Douglas Karr
Kuchengeta kumberi kwekuchengeteka kunogara kuri dambudziko online Nimbus Hosting ichangobva kugadzira graphic inobatsira, inoratidza kukosha kweiyo nyowani pachena SSL chitupa danho reCommerce brand, pamwe nekupa yakatarwa yekutarisa kuti ubatsire nekushambadzira kufambisa webhusaiti yako kuenda kuHTTPS. Iyo infographic, Transparent SSL & Maitiro Ekufambisa Yako Webhusaiti kuenda kuHTTPS muna 2017 inoratidza mienzaniso yekuti nei iyi nyowani SSL danho ichidikanwa.
Dzimwe SSL Horror Nhau Dzinosanganisira
Vasori veFrance - Google yakawana kuti French French agency yaishandisa zvisimba zvitupa zveGoogle SSL kuongorora vashandisi vanoverengeka.
Github vs China - Mumwe mushandisi aidzora subdomain yeiyo yekuvandudza saiti yekugamuchira Github akapihwa zvisirizvo duplicate SSL chitupa chese domeini neChinese chitupa chiremera.
Vakatambudzwa veIran - Vakagadzira zvitupa zvedigital zvakapihwa naDigiNotar zvakashandiswa kubaya maakaundi eGmail evashandisi vanosvika mazana matatu eIran muna 300,000.
Nezvikonzero izvi uye nezvimwe, kana webhusaiti yako isina Transparent SSL chitupa muna Gumiguru 2017, Chrome inoisa chiratidzo pawebhusaiti yako se Kwete Kuchengeteka, kuodza moyo vashandisi kubva pakuishanyira, uye yako webhusaiti chengetedzo inogona kuve panjodzi. Ino ndiyo nguva yakanaka yekukwira.
Mhanya neGoogle Transparency Test pane yako SSL Chitupa
Chitupa cheGoogle Chijekesa Chirongwa
Mumakore achangopfuura, nekuda kwekukanganisa kwechimiro muhurongwa hwechitupa cheHTTPS, zvitupa uye kuburitsa maCA zvakaratidza kuve panjodzi yekukanganisa nekushandisa zvisirizvo. Chitupa cheGoogle Chitupa inotarisira kuchengetedza maitiro ekuburitsa chitupa nekupa yakavhurika sisitimu yekutarisa uye kuongorora zvitupa zveHTTPS. Google inokurudzira maCA ese kuti anyore zvitupa zvavanoburitsa pachena, zvinongedzo-chete, zvinokanganisa-matanda. Mune ramangwana, Chrome nemamwe mabhurawuza anogona kusarudza kusatambira zvitifiketi zvisina kunyorwa kumatanda akadaro.